Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Boqoradda Elizabeth II ayaa diiday abaalmarinta Oldie of the Year
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Entertainment • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Boqoradda Elizabeth II ayaa diiday abaalmarinta Oldie of the Year.
Boqoradda Elizabeth II waxay ku adkaysanaysaa “inaysan buuxin shuruudihii ku habboonaa” ee abaalmarinta, maxaa yeelay “waad da’ weyn tahay sidaad dareento. ”
Majaladda 'The Oldie' ayaa u dooratay Queen Elizabeth II abaalmarinta majaladda sannadka 2021 ee Oldie of the Year.
Boqorka Ingiriiska ee ugu xukunka dheeraa wuxuu soo jeediyay majaladda 'The Oldie' inay meel kale eegto.
Cadadkii ugu horreeyey ee majaladda ayaa dib loo daabacay 1992-kii, daabacaadduna waxay tan iyo markaas ilaalisay qaab-dhismeedkeeda indho-sarcaadka ah, iyadoo loogu dabbaaldegayo gabowga dhaqan u badan dhallinyaro.
The Oldie, oo ah joornaal bille ah oo Ingiriis ah oo loo qoro dadka waayeelka ah “beddel qalbi furan oo ah saxaafadda ku mashquulsan dhallinta iyo dadka caanka ah”, xikmadda Queen Elizabeth II ka dib markii ay ku wargelisay in loo doortay abaalmarinta majaladda 2021 ee Oldie of the Year .
Ammaankeeda Queen Elizabeth II ayaa diiday magac loogu abaal -mariyey dadka waayeelka ah wax -qabadkooda, iyagoo ku adkaystay in “aysan buuxin shuruudihii khuseeyey” sababtoo ah “waxaad tahay qof da’ ah sida aad dareento. ”
Majaladda ayaa daabacday jawaabta boqorka cadadkeedii November, in kasta oo farriinta lafteeda ay ku taariikhaysan tahay 21 -ka Agoosto.
Warqad kooban oo saddex sadar ah, boqorka Ingiriiska ee ugu xukunka dheeraa wuxuu soo jeediyay in joornaalku meel kale u raadiyo “qaataha mudan”.
Kursiga abaalmarinta Oldie, qoraa iyo wariye Gyles Brandreth, wuxuu ku tilmaamay warqadda boqoradda mid “qurux badan”, isagoo raaciyay, in kastoo, “laga yaabee mustaqbalka inaan mar kale ku dhawaaqi doono Weynaanteeda.”
Arrinta koowaad ee Oldie joornaalka ayaa dib loo daabacay 1992, daabacaadduna tan iyo markaas waxay taageertay qaabkeeda indho-sarcaadka, iyadoo loogu dabbaaldegayo gabowga dhaqan u badan dhallinyaro. Sanadihii la soo dhaafay, waxay siisay abaalmarinta Oldie of the Year dadka ka socda dhammaan qaybaha nolosha kuwaas oo kaalin gaar ah ka qaatay nolosha dadweynaha-laga bilaabo guuleystayaasha Oscar illaa kuwa ku guuleysta Nobel, kalkaaliyayaasha daryeelka bulshada ilaa ciyaartooyda ruug-caddaaga ah.
Xafladda abaalmarinta sannadkan-tii ugu horreysay ee qof ahaan loo qabto tan iyo 2019 sababtuna tahay masiibada-waxay ka dhacday Oktoobar 19 Hotel Savoy, iyada oo gabadha soddogga u ah Duchess of Cornwall ay soo bandhigtay abaalmarinta. Waxaa ka mid ah kuwa la siiyay hannaanka Oldie of the Year 2021 waxaa ka mid ah Delia Smith, Bob Harris, Barry Humphries, Margaret Seaman, Roger McGough, Dr Saroj Datta, Dr Mridul Kumar Datta iyo Sir Geoff Hurst.
Queen Elizabeth IIOdaygii dhintay, Amiir Philip, waxaa loo magacaabay Oldie of the Year sanadkii 2011. Waraaqdiisa mahadcelinta, wuxuu ku kaftamay: “Ma jirto wax u eg niyadda oo la xusuusinayo in sanadaha ay marayaan - si ka dhaqso badan - iyo waxoogaa waxay bilaabayaan inay tuuraan qaabkii hore. ”
Boqoradda talada haysa, oo muddo toddobaatan sannadood ah ku jiri doonta carshiga Ingiriiska sannadka 2022 -ka, ayaa weli leh jadwal mashquul ah. Talaadadii, waxay ku qabatay laba dhagaystayaal xiriiriyaha fiidiyaha, iyagoo salaamaya Japan iyo danjirayaasha Midowga Yurub, ka hor inta aysan markii dambe qabanqaabin munaasabad loogu talagalay Shir -weynaha Maalgashiga Caalamiga ah ee ka dhacaya Windsor Castle.
Oktoobar 20, 2021 at 13: 45
شات العراق شات العراق للجوال دردشة عراقية شات عراقنا